Wararka - Sababaha gariirka iyo buuqa nidaamka Haydarooliga iyo tallaabooyinkooda tirtiridda
Waxaa jira ilo badan oo gariirka iyo buuqa ku jira nidaamka haydarka, oo ay ku jiraan nidaamyo farsamo, bambooyin hawo-qaadis ah, filtarka hawo-qaadashada iyo dhuumaha. Gariirka iyo buuqa nidaamka makaanikada gariirka iyo buuqa nidaamka makaanika waxaa badanaa sabab u ah nidaamka gudbinta farsamada ee kaxeysa bamka Haydarooliga, inta badan dhinacyada soo socda.
1. Isku dheelitir la'aanta jirka wareegaya Codsiyada wax ku oolka ah, matoorada badankood waxay ku kaxeeyaan mashiinka korontada ku shaqeeya isku xidhka. Aad ayey u adag tahay in laga dhigo meydadkan wareegsan inay dhammaystiraan dheelitirnaan firfircoon. Haddii xoogga isku dheelitir la'aanta uu aad u ballaaran yahay, wuu wareegayaa Marka la abuurayo gariirka weyn ee wiishka wareegaya iyo dhawaaqa soo baxa.
2. Rakibid khaldan Nidaamka Haydarooliga wuxuu badanaa keenaa gariirka iyo buuqa dhibaatooyinka rakibaadda awgeed. Sida taageerada nidaamka biibiilaha oo liidata iyo cilladaha aasaaska, ama mashiinka korontada ku shaqeeya iyo mashiinka mashiinka ma ahan mid kooban, isku xirnaantuna waa dabacsan tahay, kuwani waxay sababi doonaan gariir iyo sawaxan weyn.
3. Marka bamka haydarku shaqeynayo, haddii iska caabbinta tuubbada nuugista saliidda ay aad u ballaaran tahay, waqtigan, saliida haydarka waa xilli dambe in la buuxiyo godka nuugista saliidda ee mashiinka, taasoo keeneysa faakiyuum qeyb ahaan nuugista saliidda ah. daloolka iyo sameynta cadaadis taban. Haddii cadaadiskan uu gaaro hawada saliidda Marka cadaadiska la kala saaro, hawada asal ahaan ku milmay saliidda waxaa lagu soo dejinayaa qaddar tiro badan, iyadoo sameysmeysa xaalad bilaash ah oo goobooyin hawo ah. Markuu bamka wareegaayo, saliidan leh goobooyin hawo ah waxaa loo wareejiyaa aagga cadaadiska sareeyo, iyo goobooyinka hawo waxaa sababa cadaadis sare. Hoos u dhig, jab oo baabi'i, sameynta naxdin xoog leh oo soo noqnoqota oo maxalli ah
Habka gaarka ah waa:
1. Isku-xidhka tuubbada nuugista ee mashiinka waa in si adag loo xidhaa si looga hor tago qaadashada hawada;
2. Si macquul ah u naqshadeyso haanta shidaalka. Ka-hortagga daloolka fure-yada korontada ku shaqeeya Kala-soocidda faleebada korantada waxaa badanaa la sameeyaa si loo yareeyo caabbinta nuugista ee mashiinka. Tallaabooyinka sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah adeegsiga tuubbo nuugid ballaciisu weyn yahay, shaandho wax-soo-saar kar-weyn leh, isla mar ahaantaana looga fogaado inay xirmaan shaandhada saliidda; dhererka nuugista ee mashiinku waa inuu ahaadaa mid yar intii suurtogal ah.
3. Kahortaga jiilka qalalaasaha iyo wareejinta dhuumaha. Markaad naqshadeynayso dhuumaha nidaamka haydarooliga, qaybta dhuumaha waa inay isku dayaan inay ka fogaadaan ballaarin lama filaan ah ama foosha; haddii biibiile qaloocsan la isticmaalo, gacantiisa xagal-socodku waa inuu ka badan yahay shan jeer dhexroorka tuubbada. Tallaabooyinkani labadaba waxay si wax ku ool ah uga hortagi karaan jiilka qalalaasaha iyo wareejinta dhuumaha.
Qaybaha unugyada korontada waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu siiyo tamarta kiciyaasha, inta badan matoorada hawo-haadka. Ka dib marka dareeraha waxsoosaarka uu dhex maro aalad kontorool iyo hagaajin cayiman (filtarka kaladuwan ee kaladuwan) ee kuleylaha, dhaq dhaqaaqayaashu waxay dhameystiri karaan ficilada qaarkood, sida dhululubada korantada. Telescopic ama wareegga matoorka Haydarooliga!
Waqtiga boostada: Nofeembar-17-2020